Mudanayaasha Gabdhaha ee ka tirsan Aqalka Sare oo booqday Xabsiga Dhexe | Somali National Television - sntv.so
Home AQALKA SARE Mudanayaasha Gabdhaha ee ka tirsan Aqalka Sare oo booqday Xabsiga Dhexe
Mudanayaasha Gabdhaha ee ka tirsan Aqalka Sare oo booqday Xabsiga Dhexe
Xubnaahaasi ayaa waxa ay la kulmeen taliyaha guud ee ciidanka Asluuubta Soomaaliyeed Sarreeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac oo xafiiskiisa uu ku soo dhaweeyay waxa uuna uu warbixin ka siyayay shaqada ka socta taliska.
Ujeedka boqashada shaqo ee ay ku yimadeen xildhibaanadan ka tirsan Aqalka sare ayaa eheed sidii ay u ogaan lahaayeen gabdhaha ku jira ciidanka Asluubta Soomaaliyeed kuwaas ka mid noqanaya Ciidamada xaslinta Caasimadda.
Sidoo kale waxaay boqdeen qeybaha kala duwan ee ay ka koobantahay warshada, iyagoo ku riyaaqay howlaha ka soocda warshada iyo dadaalada ka socda taliska.
Taliye ku xigeenka Ciidanka Asluubta soomaaliyeed janaraal Cabdikariim Cali Afrax ayaa u mahadceliyay boqashada ay ku yimadeen taliska Ciidanka Asluubta Sanatarada Aqalka sare waxa uuna kula dardaarmay in ay sii lab jibaraan howlah shaqo ee Qaranka ay u hayaan.
Previous articleMaamulka Gobalka Banaadir oo abaal marin gudoonsiiyay Maamulka Degmada Hilwaa
Next articleWasaaradda Gargaarka iyo Masiibooyinka oo gudoontay lacag lagu caawinaayo barakacyaasha